Xildhibaanada ka maqan kulamada baarlamanka oo lagu ganaaxayo boqolaal dollar – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Gudoonka baarlamaanka Soomaaliya oo ka carooday xildhibaanada faraha badan ee ka maqan kulamada baarlamaanka oo howlo badan u yaallaan ayaa guddiga dishibiilnka faray iney la xisaabtamaan xildhibaanada maqan.
Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya oo manta shir gudoomiyey kulanka baarlamaanka ayaa sheegay in digniin iyo ganaax lacageed uu wajihi doono xildhibaan kasta ee kulmo 3 ka badan ka maqnaada cududr-daar la’aan.
Prof. Jawaari ayaa sheegay in aysan marnaba aqbali doonin Xildhibaanada iska maqnaada ee aan lala xisaabtameyn, isagoo xusay inay soo saareen ganaax la saarayo xildhibaan kasta ee kulana baarlamaanka ka maqnaada wax ka badan saddex kulan.
“Baarlamaanka wuxuu farayaa gudiga dishibiliin in wixii hadda ka dambeeya la xisaabtamaan Xildhibaanada maqnaa, ka maqnaashaha kulamadu maaha wax la aqabali karo” ayuu yiri gudoomiyer Jawaari.
“Kuwo 3 kulan maqnaada canaan iyo digniin loo jeedinayaa, kuwaii 7-maalmood ka badan maqnaadana waxaa mushaarkiisa laga jarayaa $600 (lix boqol doolar)” ayuu sidoo kale yiri Prof. Jawaari.
Sidoo kale waxaa uu sheegay gudoomiyaha inay jiraan Xildhibaano ka maqan shirarka baarlamaanka muddo 25 maalmood, isla markaana ay si gaar ah Gudiga dishibiliinka isha ugu heyn doono.
Xubno badan oo ka mid ah xildhibaanada baarlamanka Soomaaliya ayaan xaadirin kulamada joogtada, iyagoo iska joga caasimadda, gobollada ama debadda isaga safra.
Baarlamaanka Soomaaliya oo ka kooban 275 xubnood ayaa waxaa marka shirarka la qabanayo la sheegay in tirda timaada kulamada ay yihiin wax ku dhow 150 ama tiro waxyar ka badan.
Nabad sugidda oo soo bandhigtay wiil lagu sheegay weriye Shabaab